Global Voices teny Malagasy » Mpikatroka Ejipsiana Nahazo Sazy Mihantona Herintaona An-tranomaizina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Janoary 2014 17:58 GMT 1	 · Mpanoratra Rasha Abdulla Nandika Naomy
Sokajy: Ejipta, Fisamborana sy faneriterena, Fitsipika, Hafanam-po, Lalàna, Mediam-bahoaka, Solovava, Zon'olombelona, Feo voarahona, GV Mpisolovava
Nahazo sazy mihantona herintaona an-tranomaizina ilay mpikatroka Ejipsiana malaza Alaa Abd El Fattah , sy ny anabaviny Mona Seif , ary folo hafa tamin'ny 5 Janoary noho ilay raharaha naha-voarohirohy azy ireo ho nandoro ny foiben'ny kandidà ho filoham-pirenena teo aloha Ahmed Shafiq. Iray amin'ireo raharaha marobe izay niahiahian'ireo fiarahamonin'ny mpikatroka Ejipsiana sy iraisam-pirenena momba ny valifaty miharihary ataon'ny governemanta amin'ireo mavitrika tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny revolisiona 25 Janoary tao Ejipta tamin'ny 2011 izany.
ﻓﺮﺍﺷﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻌﺎﻧﺎ 🙂 @Monasosh  pic.twitter.com/IXtSkS5L3z 
Sioka mampiseho an'i Mona Seif mivoaka ny efi-pitsarana rehefa avy nampahafantarina fotsiny ilay sazy mihantona herintaona an-tranomaizina izy.
Tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana i Alaa. Notànana nanomboka tamin'ny 28 Novambra izy rehefa voampanga ho nikarakara fihetsiketsehana tsy nahazoan-dalana teo anoloan'ny Filan-kevitra Shura (Antenimieran-doholona Ejipsiana). Roa andro alohan'ny fihetsiketsehana, nandany lalàna mitaky amin'ireo mpikarakara fihetsiketsehana mba hanome vaovaom-pikarakarana any amin'ny Minisiteran'ny Atitany momba izay fihetsiketsehana kasaina atao ireo mpanao lalàna. Araka ilay lalàna vaovao, manan-jo hitaky (tsy manam-pahataperana) ny fanovana ny fikarakarana ara-pitaovana ny minisitera. Raha tsorina dia hahafahan'ny minisitera hanakana fihetsiketsehana tsy ho tontosa izany, araka izay mety aminy.
Ny vondrona Tsy Manaiky Ny Fitsarana Miaramila Hoan'ny Sivily, hetsika natsangan'i Mona Seif saingy tsy mpikambana amin'izany ny anadahiny Alaa, no nikarakara izany fihetsiketsehana izany. Namoaka fanambarana an-gazety ny vondrona amin'ny filazany ny fiandraiketana ny fikarakarana ny fihetsiketsehana. Nametraka tatitra tao amin'ny mpampanoa lalàna ihany koa ireo mpikambana hilaza ny mahatompon'andraikitra azy ireo amin'ny hetsika. Ny fihetsiketsehana izay natao tamin'ny 26 Novambra dia mitaky ny fanafoanana ny fitsarana ara-miaramila hoan'ireo sivily izay voalazan'ny lalàmpanorenana vaovao izay hofidian'ny Ejypta amin'ity volana ity.
Naparitaky ny polisy tamin-kerisetra ny fihetsiketsehana atsasakadiny teo ho eo taorian'ny nanombohany. Vehivavy 11 no notànanan'ny polisy, izay mpikambana ao amin'ny vondrona “Tsy manaiky ny Fitsarana Ara-miaramila Hoan'ny Sivily” ny ankamaroany, sy lehilahy 24. Notànana nandritra ny ora maromaro ireo vehivavy izay voadaroka avokoa izy rehetra ary ny sasany niharan'ny faohintohinana ara-pananahana nandritra ny nihazonana azy ireo. Noterena hiditra tao anaty fiaran'ny polisy izy ireo ary natsipy tany an-tanihay taorian'ny misasakalin.a Notànana nandritra ny herinandro mahery kosa ireo lehilahy ary efa navotsotra ankehitriny, afa-tsy, Ahmed Abdel Rahman, izay mbola miandry atao famotorana. Nosamborina i Alaa raha niditra an-keriny tao an-tranony ny polisy roa andro taorian'ny fihetsiketsehana ary niampanga azy ho nikarakara ity fihetsiketsehana ity. Nilatsaka izany filazana izany na dia niandry tao ivelan'ny biraon'ny polisy nandritra ny nitànan'ny polisy ny anabaviny nandritra ny folakandron'ny 26 Novambra aza i Alaa mandrapaha-tongan'ireo namany haka ny anabaviny sy ny namany natsipin'ny polisy tany an-tanihay. Na dia nogadraina aza i Alaa sy Ahmed Abdel Rahman nandritra ny iray volana mahery ary mbola miandry atao famotorana, mbola tsy fantatra hatrany ny daty hanaovana ny fotoa-pitsarana mikasika ny raharaha.
Tokony ho fotoanan'ny fisedrana hoan'ireo mpikatroka ny sazy mihantona , fa tsy fotoana any am-ponja, saingy mila manaja kosa ny lalàna mandritra izany fotoana izany izy ireo. .
Tsy ireo raharaha roa fanenjehana mpikatroka malaza ao Ejipta ireo ihany no misy ankehitriny. Vao haingana i Ahmed Maher , Ahmed Douma ary Mohamed Adel no nahazo sazy henjana 3 taona asa anterivozona amin'ny raharaha hafa, izay voampanga ho nikarakara fihetsiketsehana tsy nahazoan-dalana ihany koa. Maher no mpanorina ny vondron'ny tanora 6 Aprily, ary i Adel kosa no mpitondra tenin'ny vondrona. Nasaina nandòa onitra 50 000 EGP ($ 7000) tsirairay ihany koa ireo mpikatroka telo ireo, ary hiditra anaty fisedrana (sazy mihantona) mandritra ny telo taona hafa raha fantatra fa meloka. Nampiakatra ny fitsarana eny anivon'ny fitsarana ambony ireo mpikatroka, saingy mbola any am-ponja izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ao Alexandria, mpikatroka ela nitolomana Mahinour El Masri sy Hassan Mostafa, miaraka amin'ny efatra hafa no fantatra fa voampanga ho nikarakara fihetsiketsehana tsy nahazoan-dalana, ka nahazo sazy an-tranomaizina roa taona sy mandòa onitra 50.000 EGP ( $ 7000 ) tsirairay. Vao avy navotsotra tany am-ponja i Hassan Mostafa tamin'ny Novambra rehefa nahanton'ny mpampanoa lalàna ny sazy herintaona azony noho izy namelaka tahamaina mpampanoa lalàna iray tamin'izy nametraka fitoriana noho ny fampijaliana gadra.
Mihevitra ireo mpikatroka ao Ejipta fa noho ny antony ara-politika no nananganana ireo raharaha sy ny zavatra hafa ireo, ary natao hanagadrana ireo mpikatroka malazasy handrahonana ny hafa tsy hidikiditra amin'ny raharaha politika. Nandany ny Lalàna momba ny Fihetsiketsehana ny governemanta tamin'ny volana Novambra izay milaza fa ilaina ny mifehy ny korontana ateraky ny fifandonan'ny ankamaroan'ireo mpomba ny Mpirahalahy Miozolomana amin'nyamin'ny mpitandro ny filaminana izay matetika nivadika herisetra. Nanomboka tamin'ny fampiharana ny lalàna, nampiasaina ny lalàna mba hamoretana ireo karazam-panoherana, anisan'izany ireo mpanao fihetsiketsehana milamina, olo-tsotra sy vondrona izay niara-niasa akaiky tamin'ny revolisiona 25 Janoary sy ny taorian'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/18/56740/
 nandany lalàna : http://www.nytimes.com/2013/11/26/world/middleeast/egypt-law-street-protests.html?_r=1&
 Tsy Manaiky Ny Fitsarana Miaramila Hoan'ny Sivily, : http://en.nomiltrials.com/
 sazy mihantona: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Suspended+Sentence
 3 taona asa anterivozona : http://english.ahram.org.eg/News/89748.aspx
 an-tranomaizina roa taona : http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/90663/Egypt/Politics-/Khaled-Said-trial-protesters-jailed-for-two-years.aspx
 Lalàna momba ny Fihetsiketsehana : http://www.nytimes.com/2013/11/26/world/middleeast/egypt-law-street-protests.html?_r=0